Somaliland: Wasaaradda Deegaanka Oo Diiwaan Gelinaysa Duur Joogta Shacabku Haystaan | Gabiley News Online
Somaliland: Wasaaradda Deegaanka Oo Diiwaan Gelinaysa Duur Joogta Shacabku Haystaan
November 7, 2021 - Written by admin
Wasaaradda deegaanka Somaliland ayaa bilawday tiro-koon lagu samaynayo noocyadda kala duwan ee duur joogta lagu haysto hudheeladda iyo meelaha kale ee magaalooyinka dalkoo dhan.
Waxaanay diiwaangelintaasi ka bilaabaysaa wasaaradu afarta gobol ee Maroodijeex, Awdal, Saaxil, iyo Togdheer, kuwaasoo la soo diiwaangelin doono dhamaanba wixii duur joog ah ee ay shacabku haystaan.
Hawshani tiro-koobka duur joogta ay dadka shacabka ahi haystaan waxaa ka warbixiyay wasiirka deegaanka Shurki Xaaji Ismaaciil Baandare, iyo agaasimaha waaxda duur joogta ee wasaaradda deegaanka C/naasr Xuseen Siciid, oo si wada jir ah shir jaraa’id u qabtay.
Waxaana fulin doonta diiwaangelinta xayawaankaasi ay dadka shacabka ahi haystaan waaxda duur joogta ee wasaaradda deegaanka Somaliland oo uu hogaaminayo agaasimaha waaxda duur joogta C/naasr Xuseen Siciid.
Tiro-koobkaasi ayaanay wasaaradda deegaanku ka bilawday gobolka Maroodijeex, halka ay isla maantana wasaaraddu ugu gudubtay gobolka Awdal oo ay ka bilawday diiwaangelinta duur joogta.
iyadoo ay magaaladda Boorama gaadheen wefti uu hogaaminayo agaasimaha waaxda duur joota iyo xubno isugu jira dhakhaatiir iyo masuuliyiin kale.
Sida uu noo xaqiijiyay C/naasr Xuseen Siciid, agaasimaha waaxda duur joogta ee wasaaradda deegaanka Somaliland isagoo ku sugan magaaladda Boorama.
Diiwaangelinta duur joogta waxaa Awdal, iyo maroodijeex ku xigi doona goboladda Saaxil iyo Togdheer oo iyagana la is raacin doono, sida ay sheegtay wasiirka deegaanka Somaliland Shukri Xaaji Ismaaciil Baandare.
Iyadoo ka duulaysa xeerka ilaalinta duur joogta iyo kaymaha ee Somaliland ee Xeer Lanbar. 69/2015, kaasoo wasaaradda faraya in ay ka war hayso hadba tiradda iyo xaaladda duur joogta.
Sidoo kale waxaa jirtay wareegto ay wasiirka deegaanku hore u soo saartay oo ahayd in la diiwaangeliyo dhamaanba noocyadda duur joogta ay ee ay dadka shacabka ahi haystaan.
Geesta kale wasaaradda deegaanka Somaliland ayaa duur joogta ay dadka shacabka ahi haystaan diiwaangelisay sanadkii 2018-kii, halka sidoo kalena ay 2019-kiina hubin lagu soo sameeyay tiradda duur joogta ay dadku haystaan.
DAAWO: Shirka Jaraa’id Ee Agaasimaha iyo Wasiirka: